Burcad dhac u geysan jirtay ardayda jaamacadaha oo la xukumay. | Shabakadda Garsoor
Home Maxkamadda Ciidanka Burcad dhac u geysan jirtay ardayda jaamacadaha oo la xukumay.
Burcad dhac u geysan jirtay ardayda jaamacadaha oo la xukumay.
Muqdisho (Garsoor)- Dable Xoogga Bashiir Muxudiin Jiinow iyo Xasan Maxamuud guure oo ah wada Mooto ayaa loo heystaa in ay dhac u geysan jireen Ardayda Soomaaliyeed kuwooda u soo aada jaamacadaha qeyba kamid ah degmada Hodan ee gobalka Banaadir gaar ahaan agagaarka Seybiyaano.
5-bishii tegaty ee sanadkan ayay ciidamada amniga ka soo qabteen isgoyska Seybiyaano ee degmada Hodan, waxaana xilligaas loo gudbiyay Hey’adaha Baarista.
Waxaa jiray cabashooyin ay u gudbiyeen Hey’adaha amniga Ardayda Dhaca loo gaystay ee dhigta Jaamacadaha Plasma iyo Hornafrik.
01- Bishii 12-aad ee sanadkan ayay baaritaan dheer kadib codsasdeen xafiiska xeer ilaalinta in la maxkamadeeyo eedeysanayaasha.
18- bishii 12- add ayaa loo fariistay dacwadda dhanka ah eedeysanayaasha.
Xafiiska Xeer ilaalinta ayaa horkeenay maxkamadda sedax kamid ah ardaydii dhaca loo gaystay oo Maxkamadda ka hor cadeeyay in xilliga kala duwan ay dhac u geysteen Dable Bashiir Muxudiin Jiinow iyo Xasan Maxamuud guure, qorigii dhac lagu geystay, mootadii ay wateen labada eedeysane.
Baarihii kiiskan ayaa Maxkmadda u sheegay in ay ciidamada amniga iyo saldhiga degmada Hodan lasoo gaarsiiyay cabashada labada eedeysane, waxa ayna xilli hore oo waabarigii ah ay ciidamada amnigu qabteen labada eedaysane 5-tii bishii tagtay iyagoo qorsheynaya dhac kale .
Maxkamadda ayaa ugu dambeyn go’aan ka gaartay, waxa ay ku wada xukuntay min shan sano oo xabsi ciidan ah iyo sidoo kale in ay bixiyaan teleefanno shan ah oo ay ka qaateen ardayda oo Maxkamada la hor keenay, sida uu u sheegay warbaahinta Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute guddoomiyaha Maxkamadda Darajada koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida.
Dable Xoogga Bashiir Muxudiin Jiinow sawirka hore…..
Xasan Maxamuud guure oo ah wada Mooto sawirka 2-aad…
Previous articleBahda Garsoorka Ciidanka oo tacsi u diray Shuhadadii ku baxday gacanta Arga-gixisada…
Next articleSarkaal qori Dhashiika ah ku dilay qof rayid ah oo la xukumay